Vakakunda veGay Travel Awards 2020 vakaziviswa!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Vakakunda veGay Travel Awards 2020 vakaziviswa!
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kumhanyisa Mota • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
The 2020 Gay Kufamba Makomborero yazivisa vakundi nhasi.
Mugore rayo rechishanu, iyo Gay Travel Awards chinangwa ndechekuziva nekupa mubairo sarudza pekugara, nzvimbo dzekuenda, uye makambani ekufambisa pasirese. Aya masangano ane mukurumbira anotungamira nemuenzaniso uye anobatsira kukurudzira mamwe makambani uye mabhureki kuti vatevedze mweya wavo wekusiyana nekubatanidzwa. Ivo zvakare vanovavarira kuramba vachivandudza zvivakwa zvavo, maprotocol ekuchengetedza, uye kugona basa.
Gore rino, ngochani Kufamba Vanofuridzira vakawedzerwa kekutanga, zvakare, uye chikamu chitsva chakakosha uye chakakosha kusimudzira.
Gore rino rave risina kana rimwe. Nekupararira kwedenda pasi rese, vafambi vazhinji vanorambidzwa kufamba kana kumirira nguva yakachengeteka. Zvichakadaro, Iyo Gay Travel Awards inopa vafambi kanguva kuti vatarise pane zvakanakisa zveindasitiri sechirevo kusvika kunguva yakachengeteka kudzoka kunze uko.
Rondedzero izere yezvikamu zvegore rino uye vanokunda zvakanyorwa pazasi:
Fox Rent Mota
Makumi mana Mwaka Hotera Mexico Guta
Hilton Los Cabos Gungwa & Goridhe Resort
Iyo Langham Huntington
Skyrock Inn yeSedona
Iyo Lodge kuAshford Castle
GAY KUFAMBA INFLUENCER (TIE)